ကျားသစ်တွေဘာကြောင့် သားကောင်ကုို သစ်ပင်ပေါ်ယူတင်ပြီးမှ စားတာလဲ .. ? - Barnyar Barnyar
ကျားသစ်တွေဟာသားကောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့အခါမှာ သစ်ပင်ပေါ်ကိုဆွဲယူသွားပြီးစားသောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အာဖရိက Big Five လိုသတ္တဝါမျိုးတွေဟာ Sabi Sand Game လိုမျိုးတောင်အာဖရိကက လွင်ပြင်တွေမှာကျက်စားကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေဒီသတ္တဝါတွေကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ သစ်ကုလားအုပ်ငယ်လေးတစ်ကောင် သစ်ပင်ခွကြားမှာသေနေတဲ့နေရာ..ကြီးမားတဲ့ကျားသစ်ကြီးဟာ သွေးပေနေတဲ့ပါးစပ်နဲ့သစ်ကုလားအုပ်ကိုစားသောက်နေတာမြင်ရမှာပါ။
သူဟာ ဒီသစ်ကုလားအုပ်ကို သစ်ပင်ပေါ်ကိုချီယူသွားပြီး အရိုးပဲကျန်တဲ့အထိ ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်စားသောက်ပါတယ်။ ၃၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိတဲ့ သစ်ကုလားအုတ်ဟာ သူ့ကိုဖမ်းတဲ့သတ္တဝါထက်ပိုပြီးတော့ လေးလံပါတယ်။ ဒီကျားသစ် သူ့သားကောင်ကိုသယ်သွားခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်ဘာဂါအလုံး နှစ်ထောင်လောက်ကိုတစ်ပြိုင်ထဲသယ်ပြီးတော့ နှစ်ထပ်လောက်ရှိတဲ့အဆောက်အဦးပေါ်ကိုတက်ရသလိုပါပဲ။ သားကောင်တွေကိုသစ်ပင်ပေါ်မှာထားခြင်းကတော့ ခိုးတဲ့အကောင်တွေလက်မှလွတ်ဖို့ပဲလို့လေ့လာသူတွေကပြောကြပါတယ်။
ကျားသစ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့သားကောင်တွေကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ သူတို့ကိုယ်တစ်ဝက်လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့အကောင်ကစပြီးတော့ တစ်ကိုယ်ခွဲစာလောက်လေးတဲ့အကောင်အထိဖမ်းယူကြပါတယ်။ တောကြောင်ကြီးတွေကိုလေ့လာတဲ့ အကျိုးအမြတ်မယူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Panthera ရဲ့လေ့လာချက်အရ ကျားသစ်တွေဟာ သားကောင်အမျိုးပေါင်း ၄၀ လောက်ကိုဖမ်းဆီးစားသောက်လေ့ရှိကြကြောင်းသိရပါတယ်။ တောကြက်တွေကစပြီးတော့ သစ်ကုလားအုတ်အငယ်လေးတွေအထိဖမ်းယူစားသောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျားသစ်တွေရဲ့ သားကောင်တွေရဲ့တစ်ဝက်ကို သစ်ပင်ပေါ်တင်ထားလေ့ရှိတဲ့အတွက် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲခိုးယူခြင်းခံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခွေးအတွေ၊ ခြင်္သေ့တွေနဲ့ တခြား ကျားသစ်ထီးတွေနဲ့ယှဉ်လုရင်တော့ အသားတွေပါသွားလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
Balme နဲ့သူ့အဖွဲ့ဟာ ကျားသစ်နဲ့သူတို့ရဲ့သားကောင်တွေကို နှစ်တိုင်းမှတ်တမ်းပြုစုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေအရ ကျားသစ် ၁၀၄ ကောင်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း သတ္တဝါ ၂၂၁၅ ကောင်စားသောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ကျားသစ်တွေဟာသူတိုရဲ့သားကောင်တွေကို သစ်ပင်ပေါ်ယူသွားလေ့ရှိကြပေမယ့် အရမ်းသေးလွန်း..အရမ်းကြီးလွန်းတဲ့သားကောင်တွေဆိုရင်တော့ မြေပေါ်မှာပဲစားပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ ခွေးအတွေနဲ့ အခြား ကျားသစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း သစ်ပင်ပေါ်တင်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ကျားသစ်တွေသိမ်းထားတဲ့သားကောင်တွေသစ်ပင်ပေါ်မှကျလာတာကိုခွေးအတွေဆွဲသွားတဲ့အကြိမ်ရေပေါင်း ၃၉ ကြိမ်လောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့ ခွေးအတစ်ကောင်အနီးအနားမှာရှိနေရင်တော့ ကျားသစ်က သူ့သားကောင်ကို သစ်ပင်ပေါ်ဆွဲသွားပြီးလုံခြုံအောင်ထားမှာအမှန်ပါပဲလို့ Balme ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ခွေးအတွေဟာ ကျားသစ်ရဲ့သားကောင်အသံကိုကြားတဲ့အခါအလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ ကျားသစ်သတ်တာကိုစောင့်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး “ကျားသစ်နားမှာခွေးအတွေဝိုင်းနေတာကိုမကြာခနတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစာရမှာသေချာတာကိုး ကျားသစ်တွေဆီကခိုးတဲ့ သတ္တဝါနှစ်ကောင်ရှိရင် တစ်ကောင်ကခွေးအပဲဖြစ်တယ် ဒီနယ်မြေမှာတော့ ခွေးအတွေက ကျားသစ်တွေအတွက်အနှောက်အယှက်ပါပဲ” လို့ Balme ကပြောခဲ့ပါတယ်။
ခွေးအတွေဟာတကယ်ကိုလည်းရဲတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ် “သူတို့ကျားသစ်ကိုတောင်ဂရုမစိုက်ပဲ သားကောင်ကိုဖမ်းဖို့ပြေးကြတာပဲ ကျားသစ်တွေနဲ့ခွေးအတွေ တိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်တော်တို့မြင်ဖူးပါတယ် ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်တော့ ခွေးအတွေနိုင်တာပါပဲ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီကြောင်ကြီးကိုသတ်ပြီးတော့တောင်စားကြပါသေးတယ်” လိုက Balme ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ ခွေးအတွေဟာသစ်ပင်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက် ကားသစ်တွေဟာသစ်ပင်ပေါ်မှာနေပြီးတော့ အောက်မှာပြေးလွှားနေတဲ့ခွေးအတွေကိုထိုင်ကြည့်နေနိုင်တာပေါ့။ ကျားသစ်တစ်ကောင်က သူ့သားကောင်ကို သစ်ပင်ပေါ်ချီသွားရခြင်းဟာသူခိုးတွေရန်ကြောင့်ပဲဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျားသစ်မတွေကတော့ သားမွေးပြီးတဲ့အခါရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ အမဲလိုက်ထွက်ပါတယ်။ သူတို့အမဲရနည်းလေလေ အကောင်ငယ်လေးတွေအသက်ရှင်နိုင်ချေနည်းလေပါပဲ။ ကျားသစ်တွေ သူတို့ရဲ့သားကောင်ကို သစ်ပင်ပေါ်သယ်သွားခြင်းဟာ သူတိုရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ Balme ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Botswana မှာဆိုရင်ခွေအတွေအရမ်းကိုများပြားတဲ့အတွက်ကျားသစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့သားကောင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ သစ်ပင်ပေါ်တင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာတော့ သူတို့အတွက်ပြိုင်ဘက်သိပ်မရှိတဲ့အပြင်သားကောင်လည်းပေါများတဲ့အတွက်သစ်ပင်ပေါ်တင်ထားတာရှားပါတယ်။
သားကောင်ကို သစ်ပင်ပေါ်တင်ထားရဲ့ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာတခြားအကြောင်းပြချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ သားကောင်က အပုတ်မမြန်တဲ့သတ္တဝါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ကျားသစ်ဟာ တခြားနေရာတစ်ခုမှာအမဲလိုက်ပြီးတော့ ပြန်လာရင်ရင်စားသုံးဖို့အတွက်ကြောင့်လည်းအခုလိုတင်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခြားလေ့လာသူတွေကပြောကြားပေမယ့် Balme ကတော့ ဒါတွေကိုသဘောတူညီမှုအနည်းငယ်သာပြသခဲ့ပါတယ်။ ကျားသစ်တွေရဲ့သားကောင်ကိုသစ်ပင်ပေါ်တင်ရတဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူခိုးတွေရန်ကကာကွယ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်ယုံတယ်လို့ Balme ကပြောကြား
ကြားသဈတှဘောကွောငျ့ သားကောငျကို သဈပငျပျေါယူတငျပွီးမှ စားတာလဲ .. ?
ကြားသဈတှဟောသားကောငျတှကေိုဖမျးဆီးပွီးတဲ့အခါမှာ သဈပငျပျေါကိုဆှဲယူသှားပွီးစားသောကျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ဒီလိုလုပျရလဲဆိုတာကို ပွောပွခငျြပါတယျ။ အာဖရိက Big Five လိုသတ်တဝါမြိုးတှဟော Sabi Sand Game လိုမြိုးတောငျအာဖရိကက လှငျပွငျတှမှောကကျြစားကွပါတယျ။ တဈခါတဈလဒေီသတ်တဝါတှကေိုမမြှျောလငျ့ထားတဲ့နရောတှမှောတှရေ့တတျပါတယျ။ ဥပမာ သဈကုလားအုပျငယျလေးတဈကောငျ သဈပငျခှကွားမှာသနေတေဲ့နရော..ကွီးမားတဲ့ကြားသဈကွီးဟာ သှေးပနေတေဲ့ပါးစပျနဲ့သဈကုလားအုပျကိုစားသောကျနတောမွငျရမှာပါ။
သူဟာ ဒီသဈကုလားအုပျကို သဈပငျပျေါကိုခြီယူသှားပွီး အရိုးပဲကနျြတဲ့အထိ ရကျပေါငျးမြားစှာကွာအောငျစားသောကျပါတယျ။ ၃၀၀ ကီလိုဂရမျရှိတဲ့ သဈကုလားအုတျဟာ သူ့ကိုဖမျးတဲ့သတ်တဝါထကျပိုပွီးတော့ လေးလံပါတယျ။ ဒီကြားသဈ သူ့သားကောငျကိုသယျသှားခွငျးဟာ လူတဈယောကျဘာဂါအလုံး နှဈထောငျလောကျကိုတဈပွိုငျထဲသယျပွီးတော့ နှဈထပျလောကျရှိတဲ့အဆောကျအဦးပျေါကိုတကျရသလိုပါပဲ။ သားကောငျတှကေိုသဈပငျပျေါမှာထားခွငျးကတော့ ခိုးတဲ့အကောငျတှလေကျမှလှတျဖို့ပဲလို့လလေ့ာသူတှကေပွောကွပါတယျ။
ကြားသဈတှဟော သူတို့ရဲ့သားကောငျတှကေိုရှာဖှတေဲ့နရောမှာ သူတို့ကိုယျတဈဝကျလောကျအလေးခြိနျရှိတဲ့အကောငျကစပွီးတော့ တဈကိုယျခှဲစာလောကျလေးတဲ့အကောငျအထိဖမျးယူကွပါတယျ။ တောကွောငျကွီးတှကေိုလလေ့ာတဲ့ အကြိုးအမွတျမယူအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ Panthera ရဲ့လလေ့ာခကျြအရ ကြားသဈတှဟော သားကောငျအမြိုးပေါငျး ၄၀ လောကျကိုဖမျးဆီးစားသောကျလရှေိ့ကွကွောငျးသိရပါတယျ။ တောကွကျတှကေစပွီးတော့ သဈကုလားအုတျအငယျလေးတှအေထိဖမျးယူစားသောကျလရှေိ့ပါတယျ။ ကြားသဈတှရေဲ့ သားကောငျတှရေဲ့တဈဝကျကို သဈပငျပျေါတငျထားလရှေိ့တဲ့အတှကျ ၃၃ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲခိုးယူခွငျးခံရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ခှေးအတှေ၊ ခွင်ျသတှေ့နေဲ့ တခွား ကြားသဈထီးတှနေဲ့ယှဉျလုရငျတော့ အသားတှပေါသှားလရှေိ့တတျပါတယျ။
Balme နဲ့သူ့အဖှဲ့ဟာ ကြားသဈနဲ့သူတို့ရဲ့သားကောငျတှကေို နှဈတိုငျးမှတျတမျးပွုစုခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့အခကျြအလကျတှအေရ ကြားသဈ ၁၀၄ ကောငျဟာ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှ ၂၀၁၅ ခုနှဈအတှငျး သတ်တဝါ ၂၂၁၅ ကောငျစားသောကျခဲ့ကွောငျးသိရပါတယျ။ ကြားသဈတှဟောသူတိုရဲ့သားကောငျတှကေို သဈပငျပျေါယူသှားလရှေိ့ကွပမေယျ့ အရမျးသေးလှနျး..အရမျးကွီးလှနျးတဲ့သားကောငျတှဆေိုရငျတော့ မွပေျေါမှာပဲစားပဈလိုကျကွပါတယျ။ ခှေးအတှနေဲ့ အခွား ကြားသဈတှရေောကျလာတဲ့အခါမှာလညျး သဈပငျပျေါတငျထားဖို့မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
ကြားသဈတှသေိမျးထားတဲ့သားကောငျတှသေဈပငျပျေါမှကလြာတာကိုခှေးအတှဆှေဲသှားတဲ့အကွိမျရပေေါငျး ၃၉ ကွိမျလောကျရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ တကယျလို့ ခှေးအတဈကောငျအနီးအနားမှာရှိနရေငျတော့ ကြားသဈက သူ့သားကောငျကို သဈပငျပျေါဆှဲသှားပွီးလုံခွုံအောငျထားမှာအမှနျပါပဲလို့ Balme ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ခှေးအတှဟော ကြားသဈရဲ့သားကောငျအသံကိုကွားတဲ့အခါအလငျြအမွနျရောကျရှိလာကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအတိုငျးထိုငျကွညျ့ပွီးတော့ ကြားသဈသတျတာကိုစောငျ့နကွေတာမဟုတျပါဘူး “ကြားသဈနားမှာခှေးအတှဝေိုငျးနတောကိုမကွာခနတှရေ့လရှေိ့ပါတယျ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အစာရမှာသခြောတာကိုး ကြားသဈတှဆေီကခိုးတဲ့ သတ်တဝါနှဈကောငျရှိရငျ တဈကောငျကခှေးအပဲဖွဈတယျ ဒီနယျမွမှောတော့ ခှေးအတှကေ ကြားသဈတှအေတှကျအနှောကျအယှကျပါပဲ” လို့ Balme ကပွောခဲ့ပါတယျ။
ခှေးအတှဟောတကယျကိုလညျးရဲတဲ့အကွောငျးပွောခဲ့ပါသေးတယျ “သူတို့ကြားသဈကိုတောငျဂရုမစိုကျပဲ သားကောငျကိုဖမျးဖို့ပွေးကွတာပဲ ကြားသဈတှနေဲ့ခှေးအတှေ တိုကျခိုကျတဲ့အဖွဈအပကျြတှကေို ကြှနျတျောတို့မွငျဖူးပါတယျ ဒါပမေယျ့မြားသောအားဖွငျ့တော့ ခှေးအတှနေိုငျတာပါပဲ တဈခါတဈလမှော ဒီကွောငျကွီးကိုသတျပွီးတော့တောငျစားကွပါသေးတယျ” လိုက Balme ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ကံကောငျးစှာပဲ ခှေးအတှဟောသဈပငျမတတျနိုငျတဲ့အတှကျ ကားသဈတှဟောသဈပငျပျေါမှာနပွေီးတော့ အောကျမှာပွေးလှားနတေဲ့ခှေးအတှကေိုထိုငျကွညျ့နနေိုငျတာပေါ့။ ကြားသဈတဈကောငျက သူ့သားကောငျကို သဈပငျပျေါခြီသှားရခွငျးဟာသူခိုးတှရေနျကွောငျ့ပဲဆိုတာကြှနျတျောယုံကွညျပါတယျ။
ကြားသဈမတှကေတော့ သားမှေးပွီးတဲ့အခါရကျအနညျးငယျအကွာမှာ အမဲလိုကျထှကျပါတယျ။ သူတို့အမဲရနညျးလလေေ အကောငျငယျလေးတှအေသကျရှငျနိုငျခနြေညျးလပေါပဲ။ ကြားသဈတှေ သူတို့ရဲ့သားကောငျကို သဈပငျပျေါသယျသှားခွငျးဟာ သူတိုရဲ့အန်တရာယျကိုကာကှယျခွငျးဖွဈတယျလို့ Balme ကပွောခဲ့ပါတယျ။ Botswana မှာဆိုရငျခှအေတှအေရမျးကိုမြားပွားတဲ့အတှကျကြားသဈတှဟောသူတို့ရဲ့သားကောငျ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ သဈပငျပျေါတငျထားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိန်ဒိယလိုမြိုးနရောမြိုးမှာတော့ သူတို့အတှကျပွိုငျဘကျသိပျမရှိတဲ့အပွငျသားကောငျလညျးပေါမြားတဲ့အတှကျသဈပငျပျေါတငျထားတာရှားပါတယျ။
သားကောငျကို သဈပငျပျေါတငျထားရဲ့ခွငျးရဲ့နောကျကှယျမှာတခွားအကွောငျးပွခကျြတှရှေိပါသေးတယျ။ ဥပမာ သားကောငျက အပုတျမမွနျတဲ့သတ်တဝါမြိုးဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒါမှမဟုတျ ကြားသဈဟာ တခွားနရောတဈခုမှာအမဲလိုကျပွီးတော့ ပွနျလာရငျရငျစားသုံးဖို့အတှကျကွောငျ့လညျးအခုလိုတငျထားရခွငျးဖွဈကွောငျးအခွားလလေ့ာသူတှကေပွောကွားပမေယျ့ Balme ကတော့ ဒါတှကေိုသဘောတူညီမှုအနညျးငယျသာပွသခဲ့ပါတယျ။ ကြားသဈတှရေဲ့သားကောငျကိုသဈပငျပျေါတငျရတဲ့မူလရညျရှယျခကျြကတော့ သူခိုးတှရေနျကကာကှယျဖို့ဆိုတာ ကြှနျတျောယုံတယျလို့ Balme ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Total Hits : 336272